SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Kwanyama Lari Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Maya Mingrelian Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Russian Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus)
Yakataurwa naISRAEL MARTÍNEZ
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa “Handichazvitarisiri Pasi”
Gore Rekuberekwa: 1963
Nhoroondo Yeupenyu: Ndaigara mumugwagwa uye ndaizvitarisira pasi
Ndakaberekerwa muCiudad Obregón nechekuchamhembe kweMexico, uye ndiri mwana wechi5 pavana 9. Taigara nechekunze kweguta racho, papurazi rababa vangu. Nzvimbo yacho yaiva yakanaka. Mhuri yedu yaiva yakabatana uye ichifara. Asi pandakanga ndava nemakore 5, kwakaita dutu rakaparadza zvinhu zvese papurazi redu, tichibva tatotamira kune rimwe guta.
Baba vangu vakatanga kuita mari uye vakabva vatanga kudhakwa. Izvi zvakakanganisa mhuri yese. Takatanga kuputa fodya yataibira baba. Pandaiva nemakore 6, ndipo pandakadhakwa kekutanga. Vabereki vangu havana kuzomboita nguva vari vese uye ini ndakabva ndatowedzera kuva chiradza.
Amai vakatanga kugara nemumwe murume uye vakaenda nesu. Akanga asingavapi mari, uye mari yaiwana amai yakanga isingakwani kutichengeta. Saka ini nevamwe vana takanga tava kungotsvagawo zvaiita kuti tirarame asi zvakanga zvisiri nyore. Ndaipukutira vanhu bhutsu dzavo, ndichitengesa chingwa, mapepanhau, masuwiti nezvimwewo. Ndaitenderera neguta rese ndichitsvaga zvekudya mumabhini evanhu vane mari.
Pandakanga ndava nemakore 10 mumwe murume akati ndishande naye pairasirwa marara. Ndakabvuma ndikabva ndasiya chikoro, ndokubva ndabva pamba. Pazuva aindibhadhara mari isingapfuuri dhora uye aindipa zvekudya zvaainhonga mumarara. Ndaigara mukamba kandakagadzira nezvinhu zvakanga zvaraswa kumarara. Vanhu vaigara munzvimbo iyi vaitaura mashoko akaora uye vaiita unzenza. Vakawanda vaiita zvemadhiragi uye vaiva zvidhakwa. Upenyu hwakandiomera zvisingamboiti, zvekuti ndaigara ndichichema usiku hwega hwega, ndichidedera nekutya. Sezvo ndaiva murombo uye ndisina kudzidza, ndainyara. Ndakagara ipapo kwemakore matatu ndichibva ndazoenda kune rimwe guta muMexico. Ndakanowana basa rekushanda muminda, ndichinhonga maruva nedonje, ndichiunganidza nzimbe, uye ndichikohwa mbatatisi.
Ndakagara panzvimbo inorasirwa marara yakaita seiyi kwemakore matatu
Papera makore 4 ndakabva ndadzokera kuCiudad Obregón. Vamwe tete vangu, avo vaiva n’anga vakandipa pekugara pamba pavo. Ndakatanga kurota zvinhu zvaityisa zvekuti ndakazopedzisira ndava kufunga kuzviuraya. Mumwe musi ndakanyengetera kuna Mwari ndikati: “Ishe, kana muriko, ndinoda kukuzivai, ndinoda kukunamatai kweupenyu hwangu hwese. Kana kuine chechi yechokwadi, ndinoda kuiziva.”
Kubvira ndiri mudiki ndakangogara ndiri munhu aifarira zvekunamata. Ndaienda kumachechi akasiyana-siyana, asi hapana chine musoro chandaiwana. Hapana chechi yaimbotaura zvakawanda nezveBhaibheri kana yakandibatsira kuti ndinyatsoziva Mwari. Mamwe machechi andakaenda aingotaura nezvekubvisa mari, uye mune mamwe maiva makazara unzenza.
Pandakanga ndava nemakore 19, mumwe mukwasha wangu akandiudza kuti Zvapupu zvaJehovha zvakamutsanangurira zvinotaurwa neBhaibheri nezvezvidhori zvinoshandiswa pakunamata. Akandiverengera Eksodho 20:4, 5. Inoti hatifaniri kugadzira zvifananidzo. Vhesi 5 inoti: “Usazvikotamira kana kunyengedzwa kuti uzvishumire, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara.” Mukwasha wangu akabva andibvunza kuti, “Dai kuri kuti Mwari anoshandisa zvidhori pakuita zvishamiso kana kuti kana achida kuti tizvishandise pakunamata, aizotirambidzirei kuti tizvishandise?” Zvakaita kuti nditange kufunga. Takazotanga kutaura zvinhu zvakawanda nezveBhaibheri. Ndainakidzwa chaizvo nezvataikurukura zvekuti ndaisamboona kuti nguva yafamba sei.
Mumwe musi akazoenda neni kumisangano yeZvapupu zvaJehovha. Ndakafarira chaizvo zvandakaona uye zvandakanzwa ikoko. Kunyange vana waivaonawo vachipindura mibvunzo yaibvunzwa uye vachitaura zvakanaka-naka pamberi pevanhu! Ndakangoti ndega hangu, ‘Vanhu ava ndivo vari kudzidziswa manje!’ Kunyange zvazvo ndaiva nemazivhudzi uye ndakapfeka zveuyanga, Zvapupu zvakandigamuchira nemaoko maviri. Imwe mhuri yakatondikoka kuti ndizouya kumba kuzodya pashure pemusangano wacho!
Kudzidza kwandakaita Bhaibheri neZvapupu, kwakandibatsira kuona kuti Jehovha Mwari ndiBaba vane rudo, vanotida pasinei nedzinza redu, dzidzo yedu, mhuri yatakakurira kana kuti tine mari here kana kuti hatina. Haasaruri. (Mabasa 10:34, 35) Ndakanzwa kuti zvandaishuvira pakunamata zvakanga zvava kuzadziswa. Ndakanga ndava kufara.
Upenyu hwangu hwakatanga kuvandudzika! Ndakarega kuputa, kudhakwa, uye kutaura mashoko akaora. Pfungwa dzisina kunaka dzandaiva nadzo zvichikonzerwa nemakuriro andakaita anosiririsa dzakatanga kupera uye ndakanga ndisisaroti zvinotyisa. Kuzvitarisira pasi kwandaimboita nemhaka yemakuriro angu uye nekuti ndakanga ndisina kudzidza kwakabva kwapera.
Ndine mudzimai akanaka uyo anoda Jehovha uye anonditsigira zvikuru. Iye zvino ndava kushanda semutariri wedunhu weZvapupu zvaJehovha, ndichishanyira ungano kuti ndikurudzire uye ndidzidzise vandinonamata navo avo vakaita sehama dzangu chaidzo. Ndinotenda kubatsirwa kwandakaitwa neBhaibheri uye kudzidziswa kwatinoitwa naMwari. Zvakandibatsira kuti ndisazvitarisira pasi.
Ini nemudzimai wangu tinonakidzwa nekubatsirawo vamwe kuziva Mwari
Tariro Kune Vasina Pekugara Uye Varombo
Mazano eBhaibheri anogona kukubatsira panyaya dzemari uye kuti usanyanye kunetseka mupfungwa.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Handichazvitarisiri Pasi”
ijwcl chits. 7
Ndakazotanga Kuwirirana naBaba Vangu